आज पनि बढ्यो सुनको मुल्य , तोलाको कतिमा कारोबार हुदै छ त? – Ap Nepal
काठमाडौं, १८ माघ । नेपाली बजारमा आज सुनको मुल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । आइतबार सुनको मुल्य तोलामा १०० रुपैयाँले बृद्धि भएको हो ।
आज छापावाला सुन प्रतितोला ९२ हजार १०० रुपैयाँमा र तेजाबी सुन प्रतितोला ९१ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन सुनको मुल्य स्थिर रहेर प्रतितोला ९२ हजार रुपैयाँ कायम रहेको थियो । आइतबार चाँदीको मूल्य भने उकालो लागेको छ ।
आज चाँदी तोलामा ३५ रुपैयाँले बृद्धि भई प्रतितोला १ हजार ३२० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । शुक्रबार पनि चाँदीको मुल्य वृद्धि भई प्रतितोला एक हजार २८५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो ।
यो पनि… आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ…
बिनिमय दर नेपाली रुपैया भन्नुको मतलव एक अमेरिक डलरको मुल्य नेपाली १०० रुपैया बरावर हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको निर्धारण गर्दछ तथा विदेशी मुद्राको कारोबारको सुपरिवेक्षण “नेपाल राष्ट्र बैंक” पाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।
Prevकाठमाडौंमा खुल्यो, अचʼ म्मको होटेल- जहाँ ६५ रुपैंयामा पे,टभरी खान पाईन्छ । मिठो भात खानलाई मान्छेको भिड (भिडिʼयो हेर्नुस)
Nextअन्ततः मुस्लिम गायक आलिफ खान पुरा भयो गायक बद्री पंगेनीलाई भेट्ने सपना (भिडियो)